Ibsa Ejjeenno Gummi Paarlamaa Oromoo Nafxanyoota irraatti
Dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundaaf
Saba fi Sablamii Cunqurfama Ethiopia hundaaf
Media Oromoo hundaaf
Gummin Paarlamaa Oromoo yeroo amma kan qabsoo geggefamuu qabu siirna Wayyanee (TPLF) Oromoo ajjesa fi hidha jiru irratti ta’uu akka qabuu amantaa qabna ture. Oromoon hundi qabsoo TPLF irratti geggesuuf hojjecha jira. Hata’uu malee Nafxayoon dhoksan Wayyaneen ijartee Samayawi ykn Blue Party jeedhamuu qabsoo nu wayyane irratti geggesinu kan Wayyane irraa jalisuun isaan ergama Berekat Simioon fudhatani dhadannoo Menelik qabatan adeemsa keenya jijjiruuf ta’uu mala. Dhaabbilee Habasha fi Media Habasha ammoo Samayawi Party kana qoorachuu dhiisani media isaani hundan, Oromoo rakkoo fi gidiraa wayyane jala jiru irratti duluun isaani walalumaa isaantti. Bara 2005 Wayyanen Qinnijiti keessatti of ijartee waan isheen isaan goote ilee dagatani Samayyawi Party wayyanen ijarte mallaqaa fi median garggara jiru. Dhaabbilee Habasha ba’ee keessatti Wayyanen akka hojjecha jirtu beeku dhabuun isaan nama aja’iba.
Moresh Gala Gady ijjoole Nafxanya ammoo qabsoo saba cunqurfama hunda waraa ukkamsuun siirna Menelik deebisuuf deeman dha. Lamiin Ethiopia kami iyuu Dhaabba Neo-Menelik hin siimatu. Oromoo irratti ibsa Moresh (Tekle Yeshaw) ‘December 28, 2013’ barreefama fi Raadiyoo Hibir irratti keene Ethiopia kan diiguu ta’uun isaa beekamadha. Oromoon Ethiopia irraa homaa hin qabu biyyaa Ethiopiatti deemuu qabu jechun isaa obsa nu dhorkuu isaa hundi Oromoo hubachuu qabu. Saba fi sablamii biyyaa Ethiopia hunda birratti jeech Takle Yeshaw balaaleefatama dha. Ethiopian lafa Kusha/Oromoo ta’u seenan galmeese ka’ee jira. Gummin Paarlamaa Oromoo gocha Siirna Menelik deebisuuf godhamuu hunda ni balaaleefata. Gochan Moresh kun uummataa Amhaara kan bakka bu’uu utuu hin tanee gocha ijjoolee Nafxanyoota durani ta’uu isaa mirkaneesaa.
Gummiin Paarlamaa Oromoo yakkaa dugguga sanyii balesu Uummataa Oromoo fi Saba fi Sablami birroo irratti raawatameef siirni Tewodros, Yohanis, Menelik, Haile Silasee, Dargii fi Wayyane (TPLF) raawataan hundi Genocide waan ta’eef qixee gaafatumuu akka qaban yoomilee falmachuu irraa of hin qusanu. Keessaatu yakkaa hamman Menelik lubu Oromoo Milliona 5 fi Uummatoota birroo kan fixee, Daa’iman Milioon ta’aan biyyaa alatti kan gurggure, Milionota garba godhe akka meeshatti kan itti fayadamee, gocha gara jabinan lamii heedu Morma, Harka fi Harma kan muree, Qabeenya uummtaa kan samee siirni Menelik addabamuu qaba malee faarfatamuu akka hin qabne fi siirna Menilk deebsuuf dhaabbilee yaalan hundi gocha Meneliktti akka gaafataman gochuuf qabsoon keenya hanga dhumatti kan itti fufu ta’aa.
Neo-Menelik fi fakkatoon isaan Media Habasha hundatti ba’uun Meeshaa bitnee Oromoo irratti dulchisuu qabna jeedhani erga labsaan, Abba Biyyumma keenya erga amanu didan Nafxanya Oromiyaa keessa jiran seeran of irraa dhorkuu qabna, kanaafuu Oromoon diina nutti dhadhacha jiru of irraa dhorkuuf tarkanfii mataa keenya fudhachuu qabna.
Dugguga Sanyii Baleesuu warii Geggesan Sirrni Tewodros, Yohanis, Menelik, Haile Silasee, dhaaltuun isaani fi Wayyane (TPLF) ittigaafatamuu qabu jeena.
Diini Uummataa Oromoo nuu irratti qabsa’aa jiruu inni dura wayyanee (TPLF) ta’uu isaa ifaa gochuu barbaana.
Neo-Menelik ijjoolen Nafxanya lamii keenya fixaa turan lafa Oromiyya keessatti hiree tokko ilee yookiin hariroo tokko ilee akka qabachuu hin qabne mirkaneesuu feena;
Dhaabbilee Oromoo adeemsaa qabsoo irratti wal mormman hundi Oromoo Abbaa Biyyaa gochuu irratti haalaa dure tokko malee walta’aan akka qabsa’aan feedhi fi haawii uummataa Oromoo simataani tokkumaa isaani akka labsan ni gaafaana.
Dhaabbilee Oromoo Dhaabbilee Habasha walin hojjetan OPDO dabalatee gara uummataa isaantti yeroon akka deebi’an ni gaafana.
Oromoon ammalee walaaluman yookiin utuu beekani Habasha jala adeemani Habasha faarsan yeroon of siiresuu akka qaban itti himuu feena.
Ijjoolee Oromoo ilaalcha garaggartumma isaani dhiisaan media Oromoo irratti Neo-Menelik balaaleefachuun marii gochaa jiran dhaabbileen Oromoo Hayuun Oromoo hundi akka isaan garggaran ni gaafaan.
Bilisummaa uummataa Oromoo fi mirga Hiree Murteefana Oromoo marii kammiituu kan hin dhiyyanee ta’u irra dedebinee ibsuu feena.
Siidaa Menelik Finfinnee irra Buqisuu, Maneen Barumsa, Kara, Gamoo fi Riiqiichaa (dildilaa) Maqaa Menelikn Oromiyaa keessatti waamaman jijjiramu qaba.
Gummin Paarlamaa Oromoo yakaa wagga 150 nuu irratti raawatama ture, Fixiinsa Uummataa Oromoo Walloo, Annoolee fi Caalii Caalanqoo kkf hunda falmachuu irraa kan of hin qusanee, arrabsoo fi waca Habasha akka marii dhala namatti kan hin fudhanee ta’uu keenya ibsina.
Injjifannoon kan uummataa Cunqurfamatti !!!
Amajii 5 barra 2014